ချစ်သူများနေ့အတွက်နောက်ဆုံးမိနစ်လက်ဆောင်များ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Valentine's Day မှာမင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုမင်းဘာများပေးနိုင်သလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးပေမယ့်အချိန်ကတိုတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်လျှင်သင် ၁၄ ရက်တည်းမှာပဲ Amazon မှရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်သင်သည်ယခုဆိုလျှင်သင်၏ဆိုဖာပေါ်တွင်သက်သောင့်သက်သာထိုင်။ ၀ ယ်ယူသူသည်သင့်ကိုမတွေ့စေခြင်းငှါ ၀ ယ်နိုင်သည်။
သူတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်သေချာသည့်မည်သည့် Apple သုံးစွဲသူအတွက်မဆိုစုံလင်သောအပိုပစ္စည်းများ အားလုံးအိတ်ကပ်ကိုက်ညီရန်စျေးနှုန်းအားလုံး၏။ Valentine's Day သည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်စပီကာများ၊ နားကြပ်များ၊ Apple Watch ကြိုးများ၊
ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှ အနက်ရောင်အတွက်သံမဏိကြိုး ၎င်းသည် ၄၂ မီလီမီတာရှိသော Apple Watch နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီးအမေဇုန်တွင်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၂၄.၉၉ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သာမာန်စားသုံးသူတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ယခုမှ ၀ ယ်ခြင်းမပြုပါက ၁၄ ခုမြောက်ငွေပေးချေမှုကိုခံယူပါ link ကို.
38mm Apple Watch အတွက်ရွေးချယ်စရာတွေလည်းရှိတယ် ဒီ Milanese သိုင်းကြိုးကိုနှင်းဆီရွှေနှင့်ငွေရရှိနိုင်ကာယူရို ၁၈.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည် Valentine Day ကို ၀ ယ်ရန်လည်းသင့်အချိန်ရောက်လိမ့်မည် ဒီ link ကို.
အခုတော့အရမ်းအေးလွန်းလို့ touch screen နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လက်အိတ်တွေဘယ်တော့မှမနာကြပါဘူး။ Mujjo တွင်မတူညီသောပစ္စည်းများရှိမော်ဒယ်များစွာရှိသော်လည်းဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သောဤနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိုက်သည် သင်ကသူတို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါလျင်လျှင်။
အရွယ်အစားအမျိုးသားလက်အိတ်€ 23,68 (link ကို)
အမျိုးသမီးလက်အိတ်အသေးစားနှင့်အလတ်စား€ 9,99 (link ကို)
သင် AirPods အချို့ကိုပေးချင်ပါသလား။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ Apple store မှာသူတို့မှာမရှိဘူးလား။ Apple Store တွင်ယခုရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ကျော်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ၁၄ ရက်မှာပဲသူတို့ကိုလက်ခံချင်ရင် Amazon ကိုသွားရမှာပါ တရားဝင်စတိုးတွင်ပေးရသောကုန်ကျငွေထက်ယူရို (၄) ပိုပေးရလျှင်ပင်။ သူတို့ကို ၁၈၃ ဒေါ်လာနဲ့ ၀ ယ်နိုင်ပါတယ် ဤ link ကို
သင်၏အရာသည်စုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့်တေးဂီတကိုနားထောင်ရန်ဖြစ်သည်n 40W စပီကာ၊ AirPlay, DLNA, Spotify နှင့်အလွန်ခေတ်မီ retro ဒီဇိုင်းတို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် WiFi ဆက်သွယ်မှုနှင့်သင်သည်စပီကာအမြောက်အများကို ၀ ယ်ပါကယူရို ၁၆၉ ဖြင့်သာလျှင် MultiRoom ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရရှိနိုင်ပါသည် ဒီ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » အိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » ချစ်သူများနေ့အတွက်နောက်ဆုံးမိနစ်လက်ဆောင်များ